RECIPE EE BOQOSHAADA PICKLED EE JIILAALKA, CUNTO KARISKA FUDUD, ILAALINTA QASACADAYSAN - MUSHROOMS
Noocyo iyo talooyin ku saabsan boqoshaada picking
Boqollaal qasacadaysan xilliga qaboobaha ee guriga dhexdiisa ... Waxaa jira cuntooyin badan oo ku filan oo loogu talogalay sameynta neefsashadan. Iyo iyadoo keliya hal xusuusta ah ee raaxeysiga this neefsashada, barmaamij walbaa wuxuu kuuskuusaa candhuuf. Ka dib oo dhan, saxan noocaas ah ayaa si fiican u dhammaystiri doona oo kala duwanaan doona menu of dabaal kasta. Laakiin si aad u diyaarisid hadiyadaha kaynta, waxaad u baahan tahay inaad wax yar ka shaqeyso.
Waxaan soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah qarsoodiga farshaxanka ah ee lagu karsado buunshahan iyo barashada sida loola tacaalo boqoshaada guriga.
Talooyin aasaasi ah oo ku saabsan boqoshaada picking
Guud walba waxay jeceshahay in ay la yaabto qaraabada iyo martiqaadka saxanka guriga. Marka arrintan la eego, dad badan ayaa diidaya inay iibsadaan suuqyada dukaanka ah ee loo diyaarin karo shakhsi ahaan, gaar ahaan haddii martida loo yaqaanno sirta ugu weyn ee sixirka ee jikada. Aynu soo bandhigno siraha ugu muhiimsan iyo sida cuntada loo kariyo ee loo karsado boqoshaada dabacsan ee jiilaalka, sababtoo ah saxan noocaas ah waa raaxo la'aan.
Ma taqaanaa? Wakhti dheer waxaa jiray wadahadallo ku saabsan boqortooyadeeda oo ay ku jiraan waxyaalahan: dhirta, ama xayawaanka. Sidaas awgeed, sannadkii 1960-kii, waxay soo gebogebeen boqortooyo kala duwan - Boqortooyada boqraha. Wakiiladiisu waxay ka kooban yihiin borotiin (taas oo u keenta xayawaanka) Ma, carbohydrates iyo macdanta (qaybahan waxay u eg yihiin dhirta).
Cuntooyinka nidaamkan waa in la doortaa oo kaliya la dhalaaliyay, ama midab leh, sababtoo ah baakadahan aan la cunin qallalan.
Sida khalka u ah marinade, ka dibna doorashada aad u fiican in la joojiyo kibis, ama miro. Doorashada ugu fiican - Rhin (taranta) iyo khal.
Macaash yar yar marin dhan, jarida qaybta hoose ee lugta. Tani waxay ku dari doontaa saxanka sidoo kale fiirin aan muuqan.
Haddii inta lagu jiro "aamusnaanta aamusan" waxaad ku imaanaysaa hadiyado waaweyn ee kaynta, waxaa lagula talinayaa inay jaraan 3-4 gogo '.
Waxaa lagu talinayaa in lagu ilaaliyo furka boqoshaada caddaan iyo boqoshaada aspen si gooni ah ka soo xididada.
Saliida qasacadaysan waa in ay ahaato maqaarka.
Diyaarinta qiimaha habka wax lagu karinta waxay ka kooban tahay baro dhawr saacadood.
Waa maxay boqoshaada ay ku habboon yihiin qaadista?
Wixii macaan dhirta ee jiilaalka bankiga ku haboon wakiillada boqortooyada kala duwan, marka laga reebo sunta, dabcan.
Ma taqaanaa? Mushrooms waxaa loo tixgeliyaa dadka degaanka kala duwan. Waxaa jira qiyaastii laba malyan oo nooc ah, oo ay ka mid tahay 100,000 oo keliya, iyo in ka yarna la cayimay.
Marka aad raadineyso noocyada ilaalinta, waa in aad kudagsaarato boqoshaada caddaan, cagaarka cagaaran, jeexan, caleemaha, xayawaanka cawska, ryadikakh, ryzhikakh, boletus lowska, boletus boqoshaada, roodhadhka, roodhyada, duubka hilibka, champignons, iwm.
Cunto-karinta wax lagu karsado boqoshaada la karkariyey jiilaalka ka badan intii ku filan. Laakiin, waxaa jira laba kaliya, kuwaas oo dhammaan martida loo malaynayo.
Baro sida loosoo gurto boqoshaada caanaha, boletus, boqoshaada caddaan ee jiilaalka.
Boqoshaada la karkariyo marinade
Habkani wuxuu ku jiraa baahida weyn, sababtoo ah raaxada jecel ee geedi socodka wax lagu kariyo waa la gooyaa dhamaan qaybaha marinade, oo waxay soo iibsadaan dabeecad gaar ah oo udgoon leh. Si aad u hirgaliso habkan waxaad u baahan doontaa:
1 kg oo ah boqoshaada;
0.5 tbsp. biyaha;
saddexaad ee koob dhalada ah;
1 tbsp. cusbada;
1 tsp sonkorta;
5-6 xabbadood oo allspice ah;
dhicin, caleen caleenta dhadhanka;
aaladda citric acid (mindida mindi).
Biyaha waxaa lagu shubaa baaquli dhaldhalaalka ah, oo khal iyo cusbo lagu daraa, iyo boqoshaada waxaa la dhigayaa isku dar ah. Dhammaan tan waa in la keeno karkariyo oo la kariyo kuleylka hooseeya.
Waa muhiim! Waqtiga karintu wuxuu ku xiran yahay nooca qaybta ugu weyn: kabaha boqoshaada caddaan ah iyo boqoshaada aspen, iyo sidoo kale chanignelles iyo champignon karkaraya 20-25 daqiiqo, lugahooda - 15-20 daqiiqadood, iyo malab-boqoshaada - 25-30 daqiiqo. Inta lagu jiro cunto karinta, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado xumbo leh shimbiraha si aan marinade uusan u noqonin daruuro.
Haddii boqoshaada ay hoos u dhaceen hoose ee digsiga, iyo xumbada ma istaagaan inta lagu jiro karkarinta, waad ka saari kartaa dabka. Waxaad ku dari kartaa allspice, sonkorta, toonta, citric acid iyo caleen caleen si aad ah u dhamaystirtay. Saxanka la qaboojiyey waa in lagu daboolaa dhalooyinka, ku shub dareeraha kareemka ah ee sare iyo ugu xidh dhir daboolka.
Boqoshaada karkarin si gooni gooni ah marinade
Qodobkani wuxuu u yahay ilaalinta boqoshaada jiilaalka waa in alaabada kaynta ay si gooni ah u kariyaan marinade biyo yar oo cusbayn leh. Nidaamka wax lagu karinta laftiisa wuxuu u eg yahay qaabka hore. Mushrooms waxaa la geliyaa weel ka buuxsamay biyo cusbayn leh (30-40 g oo cusbo ah halkii 1 litir oo biyo ah) oo la karkariyey ilaa ay alaabtu ku dhacdo hal hal oo biyaha ayaa noqda mid hufan, ma ilaabin in laga saaro xumbada. Kadibna waxay soo dhejiyeen xayawaan duumo leh ee colon ah si ay uga takhalusaan qoyaanka xad-dhaafka ah. Inta lagu jiro wakhtigan, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo marinade oo isku mid ah, taas oo loo baahan yahay waxyaabaha soo socda: (qiyaasaha loo qoondeeyay 1 l):
80% nuxurka asaliga ah: 3 tsp, ama 9% sirko (muraayad 1 dhalad ah);
sonkorta granulated - 2 tbsp.
cusbo - 1 tbsp;
caleemaha - 4-5 gogo ';
basbaaska madow - 10 digir;
allspice - 6 digir;
carnation - 2-3 burooyinkooda;
dill qalalan - 2-3 g
Dhammaan qaybaha ayaa u baahan in la isku qasan oo la kariyo. Ka dibna ku shub dareeraha la qaboojiyey galay dhalooyinka ee boqoshaada qaboojiyey iyo xiro daboolka caag ah.
Waa muhiim! Hooyooyinka qaarkood waxay ku daraan citric acid marinade (macno ahaan astaamaha mindhicirka). Qeybtaani waa nooca tallaalka tallaalka ee ka hortagga botulism. Ujeedadaas oo kale, bangiyada waxaa lagula talinayaa inaadan xirin daboolka biraha.
Waa maxay nooca pickling si loo doorto
Labada nooc ee cuntada sida lakala qaado jiilaalka ayaa u dhigma, sababtoo ah dhamaadka waxaad heleysaa saxan aan sax ahayn. Laakiin haddii aad soo sawirto xariiqda kala qaybinta, marka hore qaabka ugu horeysa waxaa lagu magacaabi karaa dhadhan fiican, iyo kan labaad - wakiilka. Xaqiiqdu waxay tahay, marinade, kaas oo boqoshaada la kariyey, ugu dambeyntii mugdi gali doonaan oo yareyn doonaan, waxay noqon doonaan kuwo muuqda. Laakiin, dhadhanka dhadhanka duurka u noqon doonaa mid gaar ah oo udgoon iyo tantalizing ubbooyinka.
Habka labaad, marinade wuxuu noqon doonaa mid hufan oo iftiin leh. Sidaa darteed, dooranaya sida loo kalluumeeyo boqoshaada jiilaalka, waa lagama maarmaan in si cad loo qeexo naftaada ujeedada geeddi-socodkan: si aad u diyaariso saxan sheeko ah miiska guriga, ama koobi "xaalado gaar ah".
U diyaargaroobidda boqoshaada oo la kariyo
Hantida guuleysiga ee hadiyadaha kalluunka waa qeyb ka mid ah dagaalka, inkasta oo feejignaan gaar ah loo baahan yahay halkan, maadaama noocyada kala duwan ee noocyada likaha laga yaabo inay xitaa khasaarihii xitaa khudaarta ugu khibrad badan. Waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa boqosha walba si aysan dambiilu u jirin sunta.
Ka dib goosashada, boqoshaada waa in loo diyaariyaa ilaalinta guriga.
Hadiyadaha kalluunka ee la ururiyey waa in lagu xalliyo nooca, sababtoo ah nooc kasta oo uu leeyahay sifooyinkiisa (dhadhanka, urta, waqtiga iyo dabeecada inta lagu jiro karinta). Noocyada waxaa sidoo kale lagula talinayaa in lagu qaybiyo cabbirka. Halkan waxaa ku yaal shuruudaha sharraxaadda: miis fadhiga, boqoshaada qiyaastii qiyaasta isku mid ah waxay u muuqataa mid soo jiidasho badan.
Waa muhiim! Haddii aad rabto inaad xajiso musqusha, xasuusnoow, inkasta oo macluumaadka lagu siiyay raashinka loogu talagalay diyaarinta boqoshaada la badiyo xilliga qaboobaha, noocyada qaar waa in aan la wada karin. Sidaa darteed, boletus way madoobaan doonaa haddii ay ku jiraan weel isku mid ah oo leh boqoshaada udgoon. Cabbitaanka hal koob oo ah caddaanka, aspen iyo boletus ayaa ku dhamaanaya boletus la dheefay, halka caddaanka leh boletus la nadiifiyo.
Ku qoynin iyo qoynin
Nidaamyadani waxay ku habboon yihiin noocyada noocan oo kale ah sida boqoshaada malabka, walruses, svinushki, iyo noocyada nadiifinta. Sidaa darteed, tusaale ahaan, agaraadka malabku waxay ku talinayaan in biyo lagu dubo saacad ka dib, ka dibna ku daadi kari biyo diyaaradeed. Habkani wuxuu kaa badbaadin doonaa waqti badan oo aad u baahan tahay nadiifinta gacanta. Sida qiimaha iyo doofaarrada, ka hor intaan la marin, waa in lagu qooyay laba maalmood biyo qabow leh. Biyaha ayaa loo baahan yahay in la beddelo 10-12 saacadood kasta.
Noocyada soo haray (cad, jimicsi, caano, boletus, iwm.) Laguma talinayo in la qooyo, maadaama ay nuugaan qoyaan badan. Waxay si fudud u baahan yihiin in la dhaqo biyo socda.
Nasiib daro mid kasta oo kalluunka ah wuxuu u baahan yahay kormeer shakhsi ah iyo nadiifin Sidaa daraadeed, marka lagu daro champignon iyo subag, maqaarka waa in laga saaraa kabaha, ugu dambeyntii waxaa lagula talinayaa in la geliyo biyo karkarin muddo 1 daqiiqo ah si loo fududeeyo habkan. In cad, aspen, boletus, syroezhek iyo lugaha kale ayaa laga soocay caps, chanterelles waxaa si fiican loo nadiifiyaa wasakhda iyo qashinka ee hoos biyo.
Waa muhiim! Meelaha la nadiifiyo waa in la dhigaa xal biyo ah, milix iyo citric acid oo ah saamiga 1 litir oo biyo ah / 1 hl. cusbo / 2g acid si looga hortago mugdiga.
Cunto marin ah oo caadi ah
Marka lagu daro kuwan, waxaa sidoo kale jira qashin guud oo loogu talagalay diyaarinta boqoshaada la kariyey ee guriga.
Si tan loo sameeyo, hadiyado kalluunka ah waa in si buuxda loo nadiifiyaa wasakh, qashin, goryaan iyo maydheen. Karkari dhogorta iyo nadiifinta boqoshaada 15-20 daqiiqo, marka la barbardhigo si aad u diyaariso dhalooyinka barafeysan, daboolka iyo suxuunta aad u baahan tahay geeddi-socodka.
Mushrooms ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale alaab caafimaad leh. Wax ka baro faa'iidooyinka boqoshaada, boletus, dhirta malab, boqoshaada, boqoshaada porcini.
Jeermiska qoriga lagu taliyay ee foornada, iyo daboolka u baahan yahay in la kariyo, oo ay weheliso qaado qaadashada kareysa.
Si loo go'aamiyo qadarka marinade, boqoshaada waxaa la dhigayaa meel dusheed oo biyaha ayaa lagu shubaa qasacadaha. Dareerka waa in la daadiyaa ilaa ay ka soo baxayso sheyga illaa 3 cm. Isla mar ahaantaana, tixgeli: inta biyo ah la isticmaalo, iyo marinade aad u badan ayaa loo baahan yahay. Si aad u diyaariso dareeraha gaarka ah, waxaad u baahan tahay milix, dhir udgoon iyo khal, taas oo lagu daro qadarka saxda ah ee biyaha karkaraya. Brine Tani waa inuu karkariyaa ilaa 5 daqiiqo, ka dib marka ay boqoshaada ku daraan. Dhammaan waxyaalaha maaddada karkarinaya 5 daqiiqadood oo kale. Cuntada la dhammeeyey waa in la geliyaa dhalooyinka, ka buuxsamay brine iyo duub. Ku dhaji natiijada "aamusnaan aamusnaan" meel qabow oo sugto sabab wanaagsan oo loo cuno. Waxaa jira cuntooyin badan oo loogu talagalay marineynta boqoshaada, xaflad kastana waxay leedahay qoryaha qarsoodiga ah ee qarsoodiga ah. Laakiin, xukunka ugu weyn ee mid kasta oo iyaga ka mid ah ma aha inay cunaan cunnida jilicsan, xitaa inta karinta. Sidoo kale, habab kasta oo ilaalin ah, waa lagama maarmaan in si adag loo adkeeyo dhammaan tilmaamaha iyo talooyinka, habdhaqanka si masuuliyadeed u diyaarinta iyo karinta boqoshaada, sababtoo ah munaasabadani waa wax xamaasad leh. Laakiin, haddii loo kariyo si waafaqsan xeerarka oo idil, natiijada dhaadheer ayaa u mahadcelineysa dhammaan dadaallada.